Ngaba isicwangciso seNjini yokukhangela sazisa i-Super Bowl ka-2012 e-Indianapolis? | Martech Zone
Ngaba isicwangciso seNjini yokukhangela sazisa i-Super Bowl ka-2012 e-Indianapolis?
NgoLwesithathu, Meyi 21, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Hayi, kodwa singathanda ukucinga ukuba ibinempembelelo ethile. Siyazi ukuba iinzame zethu, ubuncinci, zibe nefuthe eliphumelelayo kwiziphumo zeinjini yokukhangela. Ngexesha lokwazisa, i I-Super Bowl yethu ka-2012 Indawo yayingekho kuyo nayiphi na i-SERP- kodwa ngesibhengezo, yayikukuphela kwesixeko esineziza kwiziphumo zeinjini yokukhangela.
Inokuba ibiphezulu, kodwa enye yeenjongo mna noPat Coyle esasinazo nini ezintsha Iphehlelele iwebhusayithi ye-Super Bowl yayikukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi ilawulwa ziinjini zokukhangela kwaye yayiyindawo ebonakalayo kwiwebhu. Kwakunjalo-kwaye kusenjalo.
Sasisazi ukuba NFL Khange ihoye kakhulu i-Intanethi- kodwa besifuna wonke umntu abone u-Indy kuphela xa bezibuza ukuba ngubani oza kuyisingatha ngokulandelayo. Kungenxa yoko le nto ndihleli ubusuku bonke ndisebenzisa iwebhusayithi kwaye uPat wakha isicwangciso esiliqili sokucela ingxelo kunye neengxoxo kuzo zonke iisayithi zengingqi ezinje IndyMojo, I-Indianapolis Star, Ndikhetha u-Indy, Incinci i-Indiana, njl., Kwaye sacela uncedo lomnye iibhlog zengingqi ukusasaza igama.
Side sazisa i- Isiteshi se-Super Bowl 2012 se-YouTube Ukutyhala iividiyo ngaphandle. Ukugcina indawo iphila kwiinjini, sikhuphe ukutya kuzo zonke iindaba zengingqi kunye neeblogi ngeYahoo! Imibhobho kwiphepha.
Xa iindaba zazingatshintshi, iividiyo zazikho. Kwakungokuqhubekayo, ukuhlaselwa okungapheliyo komxholo kunye ne-backlinks ukuzama ukugcina indawo kwi-radar kunye ne "Indianapolis" ngokumalunga ne "Super Bowl" kunye ne "2012" kumaphepha eziphumo. Ubuchule busebenzise ngobuchule isicwangciso-buchule-ukulungisa kunye nokuphucula umxholo njengoko kufuneka.
Amagama aphambili asizisela uninzi lwezithuthi, ukugcwala kwabantu ngoku okucofayo ngoku kukhethwe i-Indianapolis:
Ukugcwala kwabantu ngoku kuye kwasuka kwi ~ 150 yotyelelo ngosuku ukuya kwi-spiking ukuya kutyelelo lwe-9,000:
Kulungile, mhlawumbi uDennis Hopper wanceda!
Jonga uhlobo oluphezulu lwesisombululo kule vidiyo I-Super Bowl yethu ka-2012 Website.
Mhlawumbi elona candelo likhulu loku yayikukuba ukukhula kwesiza kunye nokubekwa kwayo kwafezekiswa ngazo zonke iindlela ezimhlophe zomnqwazi (hayi ezimbi). Igama elilula lokuthengisa ngomlomo, uyilo olukhulu lwendawo, ukubekwa komxholo, iibhlog, kunye nemithombo yeendaba zentlalo, njl-kwisicwangciso esiliqili- kungqineke ukuba kuphumelele. Yayiliphulo elikhulu kwaye siyathemba ukuba sidlale indima encinci kwiinzame zokuzisa iSuper Bowl e-Indianapolis!
Eyona nto ibaluleke kakhulu, khange ifune mzamo mkhulu-sisicwangciso-qhinga esininzi ngaphambili kwaye uqinisekise ukuba isicwangciso eso siqhutywa ngokuqhubekekayo. Umbulelo okhethekileyo kuMark Miles kunye noPat Coyle ngokundivumela ndincede iqela. Kananjalo enkosi kwi-Innovative ngokunyamezela ukuhlelwa kwam ezinzulwini zobusuku kunye neemfuno-bezilungile.
tags: 2012 isitya esikhuluenjini yokukhangela nounSEOisitya esikhulu
Meyi 21, 2008 kwi-7: 20 PM
Umsebenzi omangalisayo kubo BONKE ababeka ixesha lokwenza le mpumelelo ingaka ye-Indianapolis yenzeke kule veki. UDoug, uliqhawe lam.
Meyi 21, 2008 kwi-7: 48 PM
Enkosi ngoncedo lwakho ngokunjalo! Ndandinxalenye enkulu kakhulu, encinci kakhulu yomzamo. Ndicinga ukuba nditsale ubusuku bonke ndaya kwiintlanganiso ezimbalwa. Amanye amalungu, kubandakanya neqela lewebhu kwi-Innovative, afaka iiyure ezininzi, ezininzi veki nganye.
Bekumnandi! Kwaye ukukhokelela ku-2012 kuya kuba kuhle!
Meyi 21, 2008 kwi-7: 32 PM
Ndiyamangaliswa kukuba nonke nithathe i2012sb endaweni ye-
Meyi 21, 2008 kwi-7: 50 PM
Ukubamba kakuhle, uStephen. Ngokwenyani igama lesizinda kunye noyilo lwewebhu lwenziwe ngaphambi kokuba mna noPat singene ebhodini. Kwakufuneka sisebenzisane noko kwakukhona kunokuba sihambe ngendlela yethu. Ndingathanda - ngenene - ndikhethe i-domain ene "2012" kunye ne "super" kunye ne "bowl" kuyo. Kwaye ngekhe ndibenayo le ndawo ifakwe kwi-subdirectory ebizwa ngokuba yi "indy". 🙂
Owu, kunye nemihlali!
Meyi 21, 2008 kwi-7: 51 PM
Enkosi! Yayingumzamo woluntu- kubandakanya indawo zosasazo zasekuhlaleni kunye neebhlogger ezivela kuwo wonke loo mmandla! Wonke umntu othathe ixesha ukubhala ngalo uye wanikela.